Aukkwingyi Seed farm starts to implement Seed Farm Investment
မျိုးသန့်ခြံရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုကို စတင်အကောင်အထည်ဖော်နေသည့် အောက်ကွင်းကြီး မျိုးသန့်ခြံ
As per the outputs of the RSSD project, the Seed farm Investment workplan has started to get implemented in the Government Seed farms. The Aukkwingyi Seed farm in Pyar Pone district has started the ground survey and estimation.
The Seed Farms were granted an Investment fund from the RSSD project after many deliberations and workshops, to upgrade the seed farms' production capabilities.
ဖျာပုံခရိုင်အတွင်းရှိ အောက်ကွင်းကြီးမျိုးသန့်ခြံတွင် မြေပြင်စစ်တမ်းကောက်ယူခြင်းနှင့် ခန့်မှန်းတွက်ချက်ခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများ ပြုလုပ်ပြီးနောက်ပိုင်းတွင် မျိုးသန့်ခြံများ၏ မျိုးစပါးထုတ်လုပ်ခြင်းများ အဆင့်မြင့်တင်နိုင်ရန်အတွက် RSSD စီမံကိန်းမှ မျိုးသန့်ခြံများသို့ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု ရံပုံငွေများကို ပေးအပ်ခဲ့ပါသည်။
Survey work for irrigation canal in Aukkwingyi farm
Land Levelling in Aukkwingyi Seed farm